Ndị agha na-emegide ntinye ego ndị China na Pakistan wakporo ụlọ nkwari akụ ise
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ndị agha na-emegide ntinye ego ndị China na Pakistan wakporo ụlọ nkwari akụ ise
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị oji egbe atọ wakporo ụlọ oriri na nkwari akụ ise a na-akpọ Pearl-Continental Hotel Gwadain un ndị Pakistani nke Balochistan, na-egbu opekata mpe otu onye, ​​ndị isi kwuru. Otu ọnụ na-ekwuru ụlọ nkwari akụ kwuru na enweghị ọtụtụ ndị ọbịa na ndị ọrụ n'ihi Ramadan.
Ndị ọbịa niile nwere ike ịkpọpụ ndị ọbịa na ndị ọrụ. Ndị ọrụ nchekwa ahụ gbusiri ndị mmegide atọ ahụ.
Ebumnuche ahụ bụ ndị ọchụnta ego China dịka ndị agha. China na etinye ego Ijeri Dollar na mpaghara Pakistan.
Na-ele anya na Oké Osimiri Arabian, Zaver Pearl-Continental Hotel Gwadar dị na nnukwu Koh-e-Batil Hill, n'ebe ndịda nke West Bay na Okporo Fishzọ Azụ. Hotellọ nkwari akụ ise ahụ dị mma maka ndị njem azụmahịa na ndị njem.
Onye kewapụrụ onwe ya na Balochistan Liberation Army kwuru na ọ wakporo mwakpo ahụ iji zube ndị China na ndị ọzọ na-achụ ego. Ndị agha na Balochistan na-emegide itinye ego nke ndị China, na-ekwu na ọ bụ obere uru ọ bara ndị obodo.
Chinese Continental dollars n'ihi azụ kpakpando ise ụlọ nkwari akụ ise ndị ji egbe Ọdụ ịkwụsị ego investments investors igbu okowot Oge ntụrụndụ ndị njem ntụrụndụ dị ndị agha nde nde dollar ndị isi isi emegide Pakistan Pakistani pearl ógbè Ramadan n'okporo ụzọ si Oké osimiri Security mkpara Star lekwasịrị Mpaghara UN West